Ismaamullada dalka oo helaya in ka badan 400 oo bilyan | Star FM
Home Wararka Kenya Ismaamullada dalka oo helaya in ka badan 400 oo bilyan
Ismaamullada dalka oo helaya in ka badan 400 oo bilyan
Dowladaha ismaamullada ee dalka ayaa la filayaa in miisaaniyad sanadeedkan ay helaan dhaqaale dhan 409 bilyan oo shilin ka dib heshiis la gaaray.
Ismaamullada wadanka ayaa miisaaniyad sanadeedkii hore ay dowladda dhexe siisay 369.9 bilyan.
Hasa ahaate golaha qaran ee xeer dejinta ayaa laga doonayaa in uu qorshahan ansaxiyo.
Tani ayaa timid ka dib kulan uu yeeshay golaha miisaaniyadda iyo dhaqaalaha ee ismaamullada iyo dowladda dhexe ee (IBEC).
Waxaa shirka guddoominayay madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto iyadoo ay ka qayb galeen wasiirka wasaaradda maaliyadda Ukur Yatani, guddoomiyaha guddiga qoondeynta dakhliga ee CRA Jane Kiringai,maareeyaha miisaaniyadda dowladda Margaret Nyakang’o, xoghayaha wasaaradda dowlad wadaajinta Charles Sunkuli iyo dhammaan wasiirada maaliyadda ee ismaamullada.
Waxyaabaha lagu heshiiyay waxaa ka mid ah in ismaamullada ay qaadan karaan amaah lacageed oo dhan 60 bilyan si ay ugu adeegsadaan gaabadka ka jiro bixinta qarashaadka dhanka horumarka.
Previous articleDHAGEYSO:Dowladda Soomaaliya oo adkaynaysa in shirka wadatashigu ka dhaco magaalada Garoowe
Next articleJoe Biden oo saxiixay in xayiraado la saaro taliyaasha militari ee Myanmar